Alqaacidada Jazeeradda Carabta oo u tacsiyeeyey Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 7 September 2014 8 September 2014
Mareeg.com: Alqaacidada Jazeeradda Carabta ayaa ka hadlay dilkii Mareykanku gobolka Shabeellaha Hoose ee dalka Soomaaliya ugu geystay hogaamiyihii Alshabaab, Axmed Cabdi Godane (Abuu Zubeyr).
Bayaan kazoo baxay Alqaacidada Jazeeradda Carabta ee fadhigoodu yahay dalka Yemen ayaa loogu tacsiyeey dhamaan kooxaha Islaamiyiinta ah ee ka dagaalama dunida, kadib dilkii lkoo geystay Amriikii Alshabaab.
“Walaalaheena Mujaahidinta Bariga Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa Soomaaliya waxaan leennahay: Abu Zubeyr iyo qof la mid ah ilmadiina ha u qubato, Mujaahidkaas muhaajirka ahaa, geesigaas adkeysiga badnaa, haddii aan dadaalno xittaa ka ma soo bixi karno ineynu oofinno in yar oo xaqqiisa ah” ayaa lagu yiri bayaanka Alqaacidada Jazeeradda Carabta.
Alqaacidda ayaa Abuu Zubeyr ku amaanay bayaanka ay soo saareen, waxeyna ku sheegeen inuu ahaa nin aan ka laaban go’aanadiisa.
“Walaalaheena jooga Ardul Hijrateyn ee aan jecelnahayow: walaalahiina Jaziiratul Carab haddii wax laga weydiiyo Sheekh Abu Zubeyr ama ay ka hadlaan waxey marqaati furayaan oo ay xaqiijinayaan in Abu Zubeyr uu qalbi thaabit ah oo aan labalabeyn iyo go’aan adag oon leex leexasho laheyn uu kula taagnaa dhabaha nafhurka iyo Jihaadka ilaa uu Rabbigiisa la kulmay isagoo ah Mujaahid, Saabir ah” ayey sidoo kale yiraahdeen Alqaacidada Jazeeradda Carabta.
Mareykanka ayaa hogaamiyihii Alshabaab ku dilay duqeyn diyaaradeen 1-dii bishaan xilli uu marayey gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana Alshabaab si rasmi ah u qirteen shalay oo taariikhdu aheyd 6-da August 2014.